FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BA-SHAR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Ba-Shar
Alika mifangaro mifangaro Basset Hound / Shinoa Shar-Pei
'Ity no fangaro Bassett / Shar-Pei, Jed. Manodidina ny 3 taona sy 45 pounds izy. Jed dia alika be fitiavana ary indraindray maditra. Tena marani-tsaina izy ary mahay manao kilasy fanofanana. Nanafaka azy tamin'ny fialofana iray izahay, 1 taona lasa. Tiany ny mandehana an-tongotra ary milalao ny kilalaony. Mifanaraka tsara amin'ilay alikanay hafa, i Lucas ( Great Dane ). '
Ny Ba-Shar dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Basset Hound ary ny Shar-pei . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Alika kely Ba-Shar mainty mainty amin'ny 6 herinandro (Alika mifangaro Basset Hound / Sinoa Shar-Pei mifangaro)
Alika kely Ba-Shar amin'ny 6 herinandro (Alika mifangaro Basset Hound / Sinoa Shar-Pei mifangaro)
Alika kely Ba-Shar amin'ny 6 herinandro (alika hybrid Basset Hound / Shinoa Shar-Pei)
sarin'ny alika an-tendrombohitra Kaokazy
Jed ny mix Basset / Shar-Pei (Ba-Shar) tamin'ny faha-3 taonany
zanak'osy pitbull pitbull orona manga
'Bella the Basset Hound / Shar-Pei mix (Ba-Shar) amin'ny faha-2 taonany - ny zaitra dia avy amin'ny fandidiana hodi-masony, izay nety tokoa!'
'Mix Buddy the Basset Hound / Shar-Pei (Ba-Shar) amin'ny faha-7 taonany — tiany ny mihinana tantely!'
'Tompona roa manana Shar-Pei / Bassets efatra: Jamey (olombelona), Angus (5), Abby (5), Bella (2), Buddy (7), ary Tom (olombelona hafa!). Azonao atao ny mahita ny lelan'i Angus manga. Ny fakana an'ity sary ity dia nitovy tamin'ny fiompiana saka - samy te hitodika amin'ny lalana samy hafa izy rehetra avy hatrany! '
Mifangaro Arthur the Basset / Shar-Pei (alika Walrus) 1 taona— 'Mifanena amin'i Arthur, ny vatanay (Shar Pei / Basset). Tiany ny mitafy ny fehin-kibony ary mikapoka ny valan'alika. Tena tsara raha afaka mampiaraka izy sy Bella :) '
'Arthur miaraka amin'i Annie the Walrus puppy vaovao nanampy antsika!'
Mifangaro Arthur the Basset / Shar-Pei (alika Walrus) amin'ny 1 taona
Arthur, the Basset / Shar-Pei mix (alika Walrus) amin'ny alika kely eo akaikin'ny kilalao panda bear.
Angus the Basset / Shar-Pei mix (Ba-Shar) amin'ny faha-14 volana— 'Manakana ahy tsy an-kijanona ny olona hanontany hoe inona no karazany izy, tsy vitan'ny fampisehoana fampisehoana fotsiny izy fa tena manan-tsaina.'
I Abby, rahavavin'i Angus kambana. Hoy ny tompony: 'Izy, tahaka azy koa, dia mifangaro Shar-Pei / Basset. Ireo alika ireo dia marani-tsaina, be fitiavana ary manana vazivazy lehibe. Mety ho mafy hatoka izy ireo indraindray, toy ny rehefa manandrana manakana azy ireo tsy hanenjika bitro ianao! Maniry aho fa azo atao 'ofisialy' ny karazany - mpiara-miasa mahafinaritra izy ireo, ary lehibe lehibe, tsy dia kely loatra, tsy lehibe loatra. Ny ambiny dia 31-40 pounds. Abby dia mieritreritra fa Lab izy, ary toy ny iray ihany! '
Angus the Basset / Shar-Pei mix (Ba-Shar) amin'ny faha-14 volana
Angus the Basset / Shar-Pei mix (Ba-Shar) alika kely amin'ny 8 herinandro
laboratoara fotsy sy fangaro pitbull
'Angus sy Abby (ireo Ba-Shars roa) dia niara-nitsidika ny faran'ny herinandro. Naka sary azy roa izahay, ry zalahy sy ranabavy efa lehibe daholo! Manantena aho fa mankafy ny fivoaran'izy ireo - 2 1/2 taona izy ireo izao, ary feno fahafinaretana sy hery! (Angus dia eo ankavia, Abby eo ankavanana.) '
Max, fifangaroan'ny Sinoa Shar-Pei sy Basset Hound (Ba-Shar) ho alika kely miaraka aminy kilalao tady
Max, fifangaroan'ny Sinoa Shar-Pei sy Basset Hound (Ba-Shar) raha alika kely
Andriamatoa Darcy the Shar-Pei x Basset Hound (Ba-Shar) alika 9 taona— Ny reniny dia tricolor Basset Hound ary ny rainy dia lilac Shar-Pei. Amin'izao fotoana izao dia manana tongotra fohy sy soroka malalaka toy ny Basset izy. Somary lava ihany izy ao amin'ny vatana, fa tsy be loatra. Izy dia manana endrika Shar-Pei tena mahazatra miaraka amin'ny maso, vava ary sofina izay mahazatra an'i Shar-Pei. Mipetraka hihinana izy (tena mitovy amin'ny Basset Hound-ko!) Fa vetivety dia nafindra trano (tsy toy ny Basset fa tena mitovy amin'ny fahadiovan'ny Shar-Pei!) '
Princess the Ba-Shar puppy (Basset Hound / Shar-Pei hybrid) eo amin'ny 13 herinandro eo ho eo— 'Tiany ny milentika ny vainganany kely maranitra amin'izay azony atao. Anisan'izany ny kitrokelin'ny tsirairay izay manakaiky. '
Princess the Ba-Shar puppy (Basset Hound / Shar-Pei mix breed) eo amin'ny 13 herinandro eo ho eo mampiseho ny lelany mainty mainty
Bailey the Ba-Shar (Basset Hound / Shar-Pei mix karazany) alika kely amin'ny 12 herinandro— 'Isaky ny mandeha any amin'ny valan'alika izahay, fara fahakeliny, olona 3 no manontany ahy hoe karazana alika iza izy. Be fitiavana izy, liana te hahafantatra ary tia ny manenjika alika manenjika baolina tenisy. Tsy afaka mandresy lahatra azy aho hanenjika ny baolina teniny manokana fa izy kosa tia manenjika alika hafa. Elaela nefa dia nitombo tao amin'ny vatany izy ary kely teo an-dohany. '
'Nanafika ny ramevany i Bailey ilay Ba-Shar, izay nitolomany nandritra ny fotoana ela, ary noviraviriny ny tendany. Rehefa nitondra azy tany PetSmart aho haka sary kilalao dia nisafidy kilalao mitovy habe aminy izy ary ankehitriny soloinay vaovao fotsiny izy izay tiany. '
'Bailey the Ba-shar hybrid amin'ny faha-2 taona, milanja 35 pounds - toa ny nijanonany io habe io ihany.'
Sary Ba-Shar 1
mastiff anglisy feno lanja mitombo
inona no atao hoe goebel?
ny alika dia manomboka amin'ny o
basset hound mifangaro amin'ny laboratoara